Archive du 20180301
Voahangy Rajaonarimampianina Ho lasa bebenoely amin’ny fifidianana ?
Antomotra ny propagandy ary efa nohamafisina tamin’ny alalan’ny volavolan-dalàna misahana ny fifidianana ny fanaraha-maso hentitra ny resaka fampiasam-bolan’ny kandida. Azo antoka fa tsy hisy fanovana firy, toy ny efa fanao mahazatra ny volavolan-dalàna hatolotra.
Lalàm-pifidianana Samy manana ny heviny ny mpanao politika
Anjaran’ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra (MPTDN) indray omaly no nanatontosa ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasany amin’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI tetsy Alarobia.
Raveloson Constant “Tsy ny mpanongam-panjakana no handidy eto”
Mivoitra ao anatin’ny lalàm-pifidianana ny fanakanana an-kolaka an’i Marc Ravalomanana tsy ho kandida filoham-pirenena. Tsy dia ny lalàna loatra, fa ny fanitrikitrihana efa nataon-dry Rivo Rakotovao efa hatry ny ela hoe:
Fivoriana tsy ara-potoana eny Tsimbazaza Miroso mankany amin’ny fivoriana iray hafa
Lany teo anivon’ny Antenimieram-pirenena tamin’ny fivoriambe azon’ny besinimaro natrehina, notarihan’ny Filohany, Jean Max Rakotomamonjy, ny fandaharam-potoana iasany manomboka ny alatsinainy 26 febroary 2018 ka hatramin’ny 5 martsa 2018.
Fanesorana ny Tale jeneralin’ny fonja Misy zavatra manjavozavo
Tsy nampoizin’ny rehetra ny fanalana ny filohan’ny fitsarana tampony, ny tale jeneralin’ny fandraharahana ny fonja, ny lehiben’ny fampanoavana eo anivon’ny fitsarana tampony nandritra ny filankevitry ny minisitra ny talata teo.
Hery Rajaonarimampianina Hitavandra vola amin’ny Rosiana indray…
Re fa handeha ho any Moscou Renivohitr’i Rosia indray ny Filoham-pirenena Malagasy atsy ho atsy, raha ny loharanom-baovao azo. Mazava ho azy aloha fa hitangirika sy hitavandra vola sy hitady fiaraha-miasa no tanjona.
Fantson-dranon`ny JIRAMA Mila fanavaozana goavana
Misy olana indray ny tsy fahalavorarian`ny asan`ny JIRAMA tato ho ato.
Andro ratsy any avaratry ny nosy Hivadika ho rivo-doza tsy ho ela
Misy faritra andro ratsy vao miforona ao avaratra atsinanan'ny Nosy ka mety hivadika rivodoza izany amin’ny faran’ity herinandro ity.
Haavon’ny entana hoentin’ny fiara Tsy voahaja ny 80 Sm
Tsikaritra ho manjaka ny gaboraraka amin’ny resaka fitaterana sy fifamoivoizana eny an-dalambe eto Antananarivo sy ny mivoaka ny renivohitra.
Fanaovam-beloma farany an’i Tsilavina Ralaindimby Noredonin’ny rehetra ny “Ny lanitra mangamanga”
Tamin’ny fanaovam-beloma farany ny nofo mangatsiakan’i Tsilavina Ralaindimby tao amin’ny efitrano Rado tetsy amin’ny tranombokim-pirenena Malagasy tetsy Anosy,
Zanak’i Fandriana sy Fikasàna Hifankahita etsy Soanierana
Aleo tara toy izay tsy misy ! Izay no azo hanambarana ny hetsika fifampiarahabana nahatratra ny taona fanao isan-taona ho an’ny Zanaky ny distrikan’i Fandriana, Fisakàna ary ny faritra Amoron’i Mania. Hetsika faha-7 hokarakarain’ny Association Ny Aina
Fifidianana ASOIMI Lany ho filoha i Jhon Love
Lany ho filoha vaovaon’ny Asoimi na Ciset (lalao hifanandrinan’ireo mpiasam-panjakana eny amin’ny andrim-panjakana samihafa eto amintsika tamin’ny fifidianana
10 volana sisa dia hifarana tanteraka, raha sitraky ny Nahary, ny fitondrana Rajaonarimampianina. Azo antoka, raha tsy fahagagana,
Nisondrotra indray ny vidin-tsolika Efa tena famonoana ny Malagasy
Toy ny mahazatra hatrany isaky ny fiandohan’ny volana, dia niakatra 90Ar isaky litatra indray ny vidin-tsolika eto Madagasikara. Raha 3840Ar ny vidin’ny lasantsy teo aloha dia lasa 3930Ar indray nanomboka halina tamin’ny 12ora.
Fivoizana foko sy firazanana Mbola mampahantra ny Malagasy hatrany
Raha niditra nametraka ny fahefana kolonialy teto Madagasikara ny frantsay ny taona 1897 dia efa voarakitry ny tantara fa naniraka mpandinika maro hijery ny kolontsaina sy fiavahan’ny faritra tsirairay avy teto.
Basy gasy tratra tany Maroantsetra Olona 4 voasambotra
Anisan’ny olana ao amin’ny kaominina Manambolo distrikan’i Maroantsetra tao anatin’izay fiakaran’ny vidin’ny vokatra fanondrana lavanila izay, ny resaka tsy filaminam-bahoaka amin’ny fampiasan’ireo andian-jiolahy basy amin’ny fanafihana ataony.
Syria Mbola sarotra ny fampiatona ny ady
Tamin'ny alarobia teo ny minisitry ny raharaham-bahiny Rosiana Sergei Lavrov dia niantso ireo mpikomy Sirianina sy ireo mpifanandrina iraisam-pirenena handray fanapahan-kevitra mba hanatanteraka ny fampiatoana ny ady any Ghouta atsinanana eo ambany fiahin’ny fitondrana Sirianina, izay namoahan’i Rosia didy.
Seranam-piaramanidina Ivato Ahitana kolikoly isan-karazany
Araka ny mari-pandrefesana ny kolikoly 2017 dia tsy nahafa-po ny ady amin`ny kolikoly eto Madagasikara .